Mmetụta nke obere-obere oge na Njem Ndị Ahịa | Martech Zone
Mmetụta nke obere oge na ndị ahịa na-eme njem
Friday, February 10, 2017 Mọnde, Febụwarị 13, 2017 Brooke Kovanda
Azụmahịa na-ekpo ọkụ nke anyị bidoro na-anụ ọtụtụ ihe bụ obere oge. Oge obere oge na - emetụta omume na atụmanya ndị zụrụ ahịa, ha na - agbanwekwa ụzọ ndị ahịa na - azụ ahịa gafee ụlọ ọrụ.
Ma gịnị kpọmkwem obere oge? N'ụzọ ndị dị a shaaa ka ha si eme njem ndị ahịa?
Ọ dị mkpa ịghọta oke ọhụrụ echiche nke obere oge di na ahia ahia dijitalụ. Chee echiche na Google na-eduga ụgwọ na nyocha ụzọ teknụzụ ekwentị ji agbanwe oghere ahịa dijitalụ.
Mee nchọta cursory google na obere oge, ị ga - achọpụta na ha na - eme ma ndị mmadụ nwee nghọta:
Tụgharịa na a ngwaọrụ - esiwanye a smartphone - na-eme na a mkpa mụta ihe, lelee ihe, ma ọ bụ zụta ihe. Ha bu oge juputara na uche nke oma mgbe a na-eme mkpebi ma na acho ihe ichoro.
Ugbu a anyị matara ihe obere oge bụ, kedu ka anyị dị ka ndị na-ere ahịa si enweta ego na ekwentị mkpanaaka ebe a. Kedu ụdị obere oge anyị kwesịrị ị payinga ntị? Dị ka Douglas Karr ekwuru na mbu, enwere ụdị anọ nke obere oge:
Achọrọ m ịma oge
Achọrọ m ịla oge
Achọrọ m ime oge
Achọrọ m ịzụta oge
Iburu archetypes nke obere oge a mgbe gi na ndi n’enye ahia n’enye ndi ahia aka ohere ichota onwe ha site na ahuhu nke onwe ha nke n’enye ozi di nkpa.
Ka anyị gbasaa ntakịrị na ihe ọ bụla azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịma iji ghọta otu esi eji obere oge maka uru ha.
Ndị ahịa chọrọ ịchọta ozi ọsọ ọsọ ma zie ezi.
Ndị ahịa nwere ozi niile dị na ụwa n'aka ha. Mgbe ha tụgharịrị na ngwaọrụ ha iji mụta, lelee, ma ọ bụ zụta, ha achọghị iwepụta oge iji gwupụta iji chọpụta ihe ha na-achọ ma ọ bụ nwee ajụjụ nke izi ezi nke isi iyi ahụ.
Ka anyị jiri ụfọdụ ndị ọrụ anyị PERQ dị ka ihe atụ. Companylọ ọrụ anyị jupụtara na asọmpi, ndị na-arụsi ọrụ ike bụ ndị hụrụ ahụike n'anya site na ahụike na mgbatị ahụ. Abịala m itinye aka na ibuli ibu.
Otu ụbọchị n'ụlọ mgbatị ahụ, na-ele ndị na-ebuli ibu dị n'akụkụ m, achọpụtara m na iji mekwuo arụmọrụ m na mbuli elu, ọ ga-akara m mma ịzụta nkwojiaka aka. M wepụtara ekwentị m ozugbo ahụ wee malite ịchọ ụdị kacha mma nke nkwojiaka maka ndị mbido. Ọtụtụ bụ naanị mgbasa ozi maka otu akara ma ọ bụ ụdị mmemme ahụike, n'ihi ya, mpụrụ saịtị ndị ahụ maka ịmatakwu ọkwa na nyocha site n'aka ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Naanị ihe ọ na-egosi bụ na ndị ahịa chọrọ ozi ziri ezi ozugbo. Ọdịnaya nke weebụsaịtị gị na SEO ga-ekpebi ihe kpatara ma websaịtị gị ọ na-eweta nsonaazụ dị mkpa n'oge obere oge nke ndị na-eri ihe, yana ma ndị ahịa ga-enwe njikọ ogologo oge ma ọ bụ na ha agaghị adị. Ọ dị oke mkpa ijide n'aka na ozi ị na-enye bụ eziokwu.
Ulo oru di mkpa na ha diri ndi n’iile ahia oge Micro-kwesiri
A na-emegharị njem ndị ahịa site na omume na atụmanya ọhụrụ. Nke a na - ejedebe na mkpa maka akara ngosi micro-kachasị nke ọma yana maka azụmaahịa dijitalụ iji jikọọ ndị mmadụ na usoro ha mgbe, ebe, na otu ha si aga njem ha.
Otu n’ime ndị ọrụ anyị bụ onye ọkpọ na-anụ ọkụ n’obi ma na-azụ ahịa onye nkuzi ọhụrụ n’afọ gara aga. Ka anyị kwuo na ọ nyochara onye na-akụ ọkpọ, Indianapolis, na nsonaazụ ndị ahụ kpalitere ọtụtụ ndị nwere ike ịzụ ọzụzụ. Nyere ya ọtụtụ oge usoro, ọ bụ ọ bụghị na-aga ichere ka ịchọta oge dị jụụ iji kpọọ onye nkụzi ọ bụla na ndepụta ahụ. Ndi mmadu choro ikike inyocha nsonaazụ. N'okwu a, ha na-enyocha naanị ndị nchịkwa n'ime radius dị kilomita ise na naanị ndị nchịkwa nwere na Tuesday na Thursday. Ozugbo ọ chọtara ndị nkuzi kwesịrị ekwesị, ọ nwere ike chọọ ikike ịme ụdị egwuregwu dabara iji hụ ndị nkuzi ọ ga - arụ ọrụ kachasị mma; ma ọ bụ, ọ pụrụ ịchọ idejupụta fọm ndị a chọrọ ka ọ mata n’oge ọ ga-eru ya aka.
Hụ otu ọ dị mkpa na azụmaahịa na-enye ahụmịhe onye ọrụ na-amamịghe maka ndị ahịa na obere oge? Eziokwu ndị gara aga, ọnụ ọgụgụ, na statics si na windo ma a bịa na obere oge. Omume ndị ahịa n'oge ndị a bụ ihe a na-ejighị n'aka na ọ bụ naanị mkpa ha na-achịkwa n'oge ahụ.
Maka azụmaahịa iji nweta mkpa ndị a pụrụ iche, ahụmịhe weebụsaịtị ga-abụrịrị ihe na-eme eme, ihe omimi, ma dị mfe. Ndị enyi anyị na CBT News chịkọtara ya nke ọma mgbe ha gbara ndị na-ege ha ntị ume ka ha mepụta weebụsaịtị jiri peeji doro anya doro anya, azụmahịa dị mfe ịchọta, onyinye pụrụ iche, na foto dị elu nke ngwaahịa nwere nkọwa miri emi.
Ihe ndị dị ka ụdị static na nkata ndụ ga-enwerịrị ikike maka ndị na-azụ ahịa ịjụ ajụjụ achọrọ na ịnweta azịza n'oge. Ọbụna nke ahụ, ụdị dị iche iche anaghị enye ndị ahịa ohere ịme mkparịta ụka 2 na ụdị.
Na a nutshell, ulo oru mkpa na-enwe ike ike iso na-azụ ahịa na-enye ndị na-azụ ihe niile ha chọrọ iji mee ka a mara ihe ịzụta mkpebi.
Njikọ aka na-aga nke ọma mgbe ụdị gị nwere ike ịkọ akụkọ ya
Oge obere oge apụtaghị na onye ahịa chọrọ ịzụta ihe. Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa na-achọ ihe ọmụma.
Mgbe nke ahụ bụ ikpe, azụmaahịa na akara ga-amata nke a dị ka ohere iji nye ozi yana, n'otu oge, gosipụta ndị ha bụ na ihe azụmaahịa ha pụtara. Ha kwesiri ịkọ akụkọ nke ika ha n'ihi na ịkọ akụkọ bụ ụzọ kachasị ike maka ndị ahịa iji jikọta akara.
Hubspot na-ekwukarị mkpa ịkọ akụkọ mgbe ọ bịara n'ụdị ndị jikọtara ndị ahịa ha. Igosipụta ihe kpatara azụmahịa ji eme ihe ha na-eme site na ịkọ akụkọ na-egwu egwu na ọdịdị mmadụ chọrọ ịchọ akụkọ n'ihe ọ bụla ha hụrụ ma mee. Akara nke gosipụtara akụkọ ha nke ọma na-enye mmetụ ozugbo maka ndị na-azụ ahịa iji jikọta ha ma nọgide na-ejikọ ha na ọkwa ọ bụla na njem njem ha.
Site n’itinye ụdị onye ha bụ na ahụmịhe nke ndị na-ere ahịa na ha, ụdị nwere ike ime ka onwe ha pụọ ​​iche n’uche ndị na-eri ihe. Inye echiche dị mma nwere ike ime ka onye na-azụ ahịa laghachi na saịtị ha mgbe oge ruru ịzụta.
ịkọ akụkọ na-eme ka nghọta na imeghe banyere azụmahịa ma ọ bụ akara. Site n'inweta akụkọ ha nke ọma, ụdị na-ewulite ihu ọma na obere oge ha.
Cheta: Micro-oge na-Actionable
Ọ bụrụ n’inye ndị na - azụ ahịa ezigbo ahụmihe n’obere oge ha, enwere ike imegharị ha ozugbo ịzụrụ ihe. Ọsọ na arụmọrụ bụ usoro nke ụbọchị.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ: Otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ Felicia nọ n'ụlọ mgbatị ahụ otu ụbọchị mgbe ọ matara na ọ ga-eme ka mgbatị ya dịkwuo elu, ọ chọrọ nkwado na nri ya. Ọ gara na ụlọ ahịa vitamin mgbe ọ na-apụ n'ime ime ụlọ mkpuchi, wee kụọ zuo na canister nke emeju ntụ ntụ.
Micro-oge dị ka nke ahụ na-eme ọtụtụ ijeri ugboro kwa ụbọchị, na azụmaahịa na ụdị dị iche iche kwesịrị ịdị mkpa iji mee ka ọ baa uru. N'ihi na ha na-eme ihe, obere oge na-enye ndị azụmaahịa ohere iji ahụmịhe dị iche iche gosi ebe ndị ahịa nọ na njem ha. Hụ otu obere oge na-akpụzi ọdịnala na ereji ukwu?
Ha choro ka ndi oru ahia nyochacha akara ha dijitalụ na usoro obula zuru ahia ka ha we zaghachi ihe ndi choro na oge.
Micro-oge pụtara na azụmaahịa ga-adị gara gara ma na-egosi ụdị ọdịnaya na ahụmịhe ha tinyere na weebụsaịtị ha, yana ọdịnaya na ahụmịhe ahụ nwere ike ịmepụta njikọ bara uru n'etiti azụmaahịa na ndị ahịa.
Tags: omume n'ji ahiaàgwà ịzụ ahịa ịzụ ahịanjem ndị ahịaNdị njem njemahịa ịzụ omumenjem ndị ahịagoogle +okpokoroachọrọ m ịzụta ogem chọrọ ime ogeachọrọ m ịga ogem chọrọ ịma ogeobere ogePERQịkọ akụkọchee na Google
Brooke Kovanda bu onye oru Orr Fellow & Marketing Coordinator na PERQ, ụlọ ọrụ teknụzụ njikọ aka na Indianapolis. N'ebe ahụ, ọ na-anya ọdịnaya na imepụta ihe okike maka ngwaahịa mgbasa ozi, ma nye nkwado maka nchọpụta ahịa na nyocha ọhụụ. Na mpụga ọrụ, Brooke nwere mmasị ịgụ, njem, gee egwu Rock 'n' Roll.
Etu ị ga - esi melite ọrịre ndị ahịa gị